musha / Applications / Induction Heating / induction preheating aluminium mavhiri ekupfira kupenda
Category: Induction Heating Tags: aruminiyamu vhiri, aruminiyamu vhiri kudziyisa, aruminiyamu vhiri preheater, motokari mavhiri preheating, induction preheater, induction preheating, induction preheating aluminium, induction preheating mota mavhiri, induction preheating vhiri, medium frequency, medium frequency heating, kupisa, preheating aruminiyamu vhiri, preheating mota aluminium mavhiri
induction preheating aluminium mavhiri yekupenda pendi
Chinangwa: Iyi yekupenda pendi yekushandisa inoda pre-kudziyisa izvo zvinhu. Pamusoro pezvo, pane zvinodiwa kuti izvo zvinhu hazvifanire kutonhodza pazasi peimwe tembiricha tembere pamberi pekupfira.
zvinhu : Zvikamu zvevatengi-zvinopihwa
tembiricha : 275 ºF (135 ºC)
maitikiro : 8 kHz
DW-MF-70kW induction heat system, Yakashongedzwa nebasa remusoro riri kure rine matatu 27 μF ma capacitor ehuwandu hwe81 μF
- Iyo induction yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanakira ichi chishandiso.
Induction Kuchenesa Maitiro
A multi-turn mubatanidzwa helical / pancake coil inoshandiswa. Iyo 22 ”vhiri realuminium rakaiswa mukati muoiri uye rinopisa kwemasekondi makumi matatu kusvika patembiricha ye30 ºF. Kana kudziyisa kwamiswa, chikamu chinoramba chiri pamusoro kana pamusoro pe275 ºF kwemasekondi 150, zvichizadzisa chinangwa chekupisa.
Mhinduro / Kubatsirwa Induction Kutya inopa:
-Iyunifomu yekuparadzira kupisa pamusoro pevhiri
-Kunyatso kudzora kwekupisa uye pateni
-Kunyatso; yakaderedza simba remagetsi
Pakati Pengoro Yakawanda Yakanyunguduka Moto